नेप्सेमा रिलायन्स लाइफको २.१० करोड कित्ता सेयर सूचीकृत, भोलिबाट कारोबारमा आउने
काठमाण्डौ । भर्खरै आईपीओ निष्कासन गरेको रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सोमबार सूचीकृत भएको छ। रिलायन्स लाइफको रु. १०० अंकित दरका २ करोड १० लाख कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो। सेयर सूचीकरणसँग अब भोलि मंगलबारबाट यो कम्पनीको सेयर धितोपत्र दोस्रो बजारमा कारोबारमा आउनेछ। नेप्से यो...
रिलायन्सको आईपीओ भर्ने आज अन्तिम मौका, अहिलेसम्म कति पर्यो आवेदन ?
काठमाण्डौ । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओमा आवेदन दिने आज सोमबार अन्तिम अवसर रहेको छ। यो कम्पनीले निष्कासन गरेको ६२ लाख कित्ता आईपीआमो आज बैंकिङ समयसम्म आवेदन दिन सकिने धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटलले जानकारी दिएको छ। कम्पनीले २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ जारी पुँजीको ३० प्रतिशतले हुन आउने प्रतिकित्ता रु. १००...
आजबाट रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओमा आवेदन खुल्यो
काठमाण्डौ । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको रु. ६३ करोडबराबरको आईपीओमा आज बिहीबार (भदौ ४ गते) बाट खरिद आवेदन खुला भएको छ। कम्पनीले २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ जारी पुँजीको ३० प्रतिशतले हुन आउने प्रतिकित्ता रु. १०० अंकित दरका ६३ लाख कित्ता आईपीओ बिक्री खुला गरेको हो। कुल कित्तामध्ये ५ प्रतिशत अर्थात ३ लाख १५ हजार कित्ता सेयर सामूहिक लगानी...
एनआरएन इन्फ्रास्टक्चरको आइपीओमा मागभन्दा ५.२४ गुणा बढी आवेदन
काठमाण्डौ । एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडले निष्कासन गरेको आईपीओमा मागको तुलनामा ५.२४ गुणा बढी आवेदन परेको छ । आइपीओ निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटलका अनुसार बुधबार साँझ ५ बजेसम्म ४ लाख २८ हजार १५३ आवेदकबाट १ करोड ६५ लाख ६७ हजार ६०० कित्ताको माग भएको हो । यो भनेको निश्कासन कित्ताको तुलनामा ५.२४ गुणाले बढी...